Izindaba - Ithemba lokuthuthukiswa kwesikhwama sephepha se-kraft
Isixha sephepha se-Kraft sisekelwe ephepheni lezinkuni, umbala uhlukaniswe waba yiphepha elimhlophe le-kraft nephepha le-kraft eliphuzi, lingasebenzisa impahla ye-PP ephepheni ngongqimba lwefilimu, umphumela ongangeni manzi, amandla esikhwama angenziwa ngokuya ngezidingo zamakhasimende izingqimba eziyisithupha, ukuphrinta nokuhlanganiswa kwesikhwama. Izindlela zokuvula ezivulekile nezingezansi zihlukaniswe ngophawu lokushisa, uphawu lwamaphepha nolwandle olungaphansi.
"I-Kraft paper bag" yisikhwama esenziwe ngezinto ezihlanganisiwe. Ngenxa yezimpawu zokuvikela okungezona ezinobuthi, ezinganambitheki nezemvelo kwezinto zokukhiqiza zesikhwama sephepha le-kraft, "isikhwama sephepha se-kraft" sesibe umkhiqizo owaziwa umhlaba wonke wokuvikelwa kwemvelo ngenkathi sanelisa ukusetshenziswa kwabantu okuluhlaza. Isikhwama sephepha se-kraft singabonakala yonke indawo ezinxanxatheleni ezinkulu zezitolo nasezitolo ezinkulu ekhaya nakwamanye amazwe. Ufana neqhawe elincane, ehamba nathi empilweni yethu yansuku zonke futhi asisize sabelane ngomthwalo wempilo.
Ukuhlakanipha okuvamile abantu abangathenga kuphela izinto eziningi ngangokunokwenzeka ukuthi baphathe nazo kuye kwaphazanyiswa ukufika kwezikhwama ezihlanganisiwe zamaphepha e-kraft, eziye zavimba abathengi abaningi ukuthi bangakhathazeki ngalokho abangakwazi ukukuthwala konakalisa izinsuku zabo zokuthenga. Uma ukuzalwa kwesikhwama sokwakhiwa kwephepha lokwakhiwa kukhuthaze ukuthuthukiswa komkhakha wonke wokuthengisa, mhlawumbe ihaba elithile, kepha okungenani kuveze isimangaliso ebhizinisini, okungukuthi, ekuhlangenwe nakho kokuthenga kwamakhasimende sekuyizinga elikhulu kakhulu lokukhululeka, okulula, ngokunethezeka ngaphambili, umane nje awukwazi ukubikezela ukuthi zingaki izinto abathengi abazothenga ngazo. Kungenxa yalokhu, kubangele abantu bakamuva ukuthi banake isipiliyoni sokuthenga kwabathengi, futhi bakhuthaza ukuthuthukiswa kwenqola yokuthenga kanye nebhasikidi esitolo kamuva.
Engxenyeni elandelayo yekhulu leminyaka, ukuthuthukiswa kwezikhwama zokuthenga ezakhiwe ngephepha kusenhlanhleni. Ukuthuthukiswa kwekhwalithi yezinto ezibonakalayo kuthuthukise umthamo wayo wokuthwala futhi kwenza ukubonakala kwayo kube kuhle kakhulu. Abenzi baphrinte zonke izinhlobo zezimpawu zokuhweba namaphethini amahle ezikhwameni zamaphepha futhi bangena ezitolo nasezitolo emgwaqweni wezohwebo. Kuze kube maphakathi nekhulu lama-20, ukuvela kwezikhwama zokuthenga ngepulasitiki kwaba inguquko enkulu emlandweni wezikhwama zokuthenga. Isikhwama sokuthenga sepulasitiki ngenxa yentengo yaso ephansi, ikhwalithi eqinile, izinzuzo ezincanyana futhi ezikhanyayo kanye nezindawo ezingenamkhawulo zekraft paper compound bag cast umthunzi. Kusukela lapho, izikhwama zepulasitiki seziyizinto abantu abazikhethela zona impilo, ibhande lezinkomo kancane kancane "ulayini wesibili". Ekugcineni, izikhwama zamaphepha okwakhiwa zingasetshenziswa kuphela kwinani elincane kakhulu lezincwadi, okokugqoka, kanye nemikhiqizo yamavidiyo egameni "lezemvelo", "lemvelo" kanye "nostalgic".
Isikhathi Iposi: Jan-28-2021